Esona siqalisi siBalaseleyo se-Android !!, eyona ndlela inyanisekileyo yokuqalisa iNova | I-Androidsis
Ividiyo entsha endifuna ukubonisa kuyo Isiqalisi se-Android ilungile kwaye intle, ngokoluvo lwam yeyokuba ngoku kwi-panorama ye-Android inokuma kwiNova Launcher.
Isiqalisi endikumemela kuso kwividiyo ebanzi engaphezulu kwemizuzu engama-20 okoko Isiqalisi sigcwele amanqaku kunye neenketho zoqwalaselo endicinga ukuba awuphoswa. Ukusukela, njengoko ndihlala ndisitsho ngokudibeneyo, uza kuyivuthela ngemibala !!.
Kwividiyo endikushiya ngaphezulu nje kwale migca, ngaphezulu kwayo, ndibonisa i-Pro okanye ingxelo ehlawulelweyo yeFlick Launcher, i-Launcher ye-Android okwangoku, kwaye nangona ikwinguqulelo "engapapashwanga", Yiyo kuphela i-Launcher ye-Android endicinga ukuba inokuma kunye nokuhlikihla amagxa nge-Nova Launcher kwaye konke oku kungaphantsi kwesiqingatha sexabiso le-Launcher eyaziwayo ye-Android. Isiqalisi endikukhumbulayo sithathwa phantse ngumntu wonke njengesona siqalisi sesona sicelo sakhahle kwimbali ye-Android
Isiqalisi se-Android endisibonisa namhlanje kuhlobo lwayo lwe-Pro ebiza i- € 2.49, kunye neNova Launcher ebiza ngaphezulu kwe- € 5, Zombini zineenguqulelo zasimahla ezifanayo nangona isebenze ngokukuko kuthintelwe kuphela kubasebenzisi bePRO yesicelo.
Emva koko ndishiya ikhonkco ngqo ukuze ukhuphele ngokuthe ngqo kwiVenkile yokuDlala ngaphandle komthetheli uguqulelo lweLauncher olunomdla kakhulu kuye, nangona sele ndikulumkisile ukuba ukuba uyazama, njengoko yenzekile kum, uya kuthi yiya kwibhokisi yokufumana inguqulo ye-PRO yesicelo kwaye uyongeze kwingqokelela yosapho lwakho nge- € 2.49 kuphela.
1 Flick Launcher (engafunekiyo) yokukhuphela simahla
2 Khuphela iFlick Launcher Pro (ayikhutshiwe)
3 Yonke into esiyifumana kuFlick Launcher, olona tshaba lukhulu lukaNova Launcher
4 Flick Launcher Pro Igalari yemifanekiso
Flick Launcher (engafunekiyo) yokukhuphela simahla
Umthuthukisi: UMichele Lacorte
Khuphela iFlick Launcher Pro (ayikhutshiwe)
ixabiso: € 3,69
Yonke into esiyifumana kuFlick Launcher, olona tshaba lukhulu lukaNova Launcher
Njengoko ndikuxelela, kwividiyo endiyishiyileyo ekuqaleni kweposti ndiyakucacisa kwaye ndikubonise ngokweenkcukacha zonke izinto asinika zona uFlick Launcher kuhlobo lwayo oluhlawulelweyo kuba khange ndikwazi ukumelana namakhubalo alo.
Isiqalisi ekunokuqaqanjiswa kuso ukuhambelana ne-Android Lollipop okanye ngaphezulu kwaye apho uMncedisi kaGoogle uhlanganiswe ngokudibeneyo nakwisikrini sasekhaya okanye idesika ephambili ngokushenxela ngasekunene njengakwi Isiqalisi sePixel sikaGoogle endikhe ndasizisa kuwe okwethutyana kwenye ividiyo-yeposi.
Umdibaniso noMncedisi kaGoogle
Ukuba olu manyano ndiluphindayo kwakhona luyahambelana ne-Android Lollipop ukuya phambili, siyongeza Ukudityaniswa kwesiGaba sePixel Launcher kunye nokubanakho ukutshintsha inkangeleko phantse yayo nayiphi na indawo yesiqalisi: Igridi yedesktop, i-drawer yeapp, ubungakanani kunye nemilo yeempawu ze-desktop, i-drawer ye-app, inkxaso yeepakethe, iindlela ezimfutshane ezivela kwidesktop kunye nee-drawer ze-app, fihla ii -apps, khusela iiapps kunye neefolda ngeminwe kunye / okanye iphasiwedi, oopopayi abachaphazela ukuvulwa kwezicelo indlela emangazayo yokuntywila kwaye akukho luhlengahlengiso lomzimba luchukumisayo, njl. Ngaba thina okanye asijonganga nenye indlela yokuqalisa iNova Launcher?
I-drawer ye-App enefuthe elibi
Ndikucebisa kwakhona ukuba ujonge ividiyo eqhotyoshelweyo endikushiye ngayo kwakamsinya nje ukuba ndiqale lo myalezo ukusukela kwimifanekiso eshukumayo kunye neenkcazo zam ngelizwi, uya kuba nakho ukubona nokuqonda ngcono ukuba kutheni uyinika le mbeko isihloko se «Eyona ndlela ilunge kakhulu yokuqalisa iNova».
Flick Launcher Pro Igalari yemifanekiso
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Esona siqalisi siBalaseleyo se-Android !!, eyona ndlela iyiyo yokuqalisa iNova
Ulwazi lwe-SVP sitsho
Hayi, kubonakala ngathi ayisiyondawo yesiqalisi seNova ... NgesiNgesi ...?
Phendula kulwazi lwe-SVP
Yinguqulelo engakhutshelwanga engapapashwa kwaye yiyo loo nto kukho iindawo zayo ezingaguqulelwanga ukusuka esiNgesini.
Kum yeyona ndlela ilunge kakhulu eya kuNova.
Ngaba uyithelekisa neNova? Umama, linjani ilizwe ...